देउसीभैलोबाट सुरु भएको प्रकाश सपुतको सफल करियरMain Samachar
देउसीभैलोबाट सुरु भएको प्रकाश सपुतको सफल करियर
१ मंसिर २०७७, सोमबार ०९:०८ प्रकाशित
तस्बिर प्रकाश सपुतकाे फेसबुकबाट साभार ।
काठमाडौं । आज भाइटीकाको दिन सप्तरङ्गी टीका र मखमली मालासहित दिदीबहिनी र दाजु भाइले खुसी साटासाट गर्ने दिन । तिहार अर्थात् भाइटीका भन्ने बित्तिकै सबैको अनुहारमा कान्ति छाउँछ ।
विश्व नै कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ । अघिल्ला वर्ष देश तथा विदेशका स्टेजमा गायक/ गायिकाहरु देउसी भैलोको कार्यक्रममा व्यस्त हुन्थे । तर अहिले काेराेना मार गीतसंगीत क्षेत्रले पनि खेप्नु परिरहेकाे छ । जसमध्ये सर्वाधिक स्टेजमा सुनिने गायक प्रकाश सपुत पनि हुन् । हामीले उनै लोकप्रिय गायकसँग तिहार विशेषमा गफिएका छौं ।
१) यसपालीका तिहारमा तपाईंको टीका छ कि छैन् ?
यसपाली हाम्रो टीका छैन । किनकि हाम्राे हजुरआमा बित्नु भएको छ ।
२) अनि टीका लगाउन नपाउँदा नरमाइलो हुने भयो नि ?
तुलनात्मक हिसाबले दशैँ नै हो ठूलो चाड । तर मेरो प्रर्सनल रोजाइँमा चाहिँ तिहार पर्दछ । तिहारमा नाचगान झिलिमिली बत्तीको रौनकले छुट्टै प्रकारको आनन्द दिन्छ ।
अझ पछिल्लो वर्षहरुको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न स्टेज कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यसमा नै बिजी भइन्थ्यो । म त झन् परारको देउसी भैलोमा ६/७ वटा प्रोग्राममा देउसी भैलो गरिरहको थिएँ । यसपटक देउसी भैलो पनि खेल्ने कुरा भएन । घरमा टीका पनि छैन रौनक नै हराएको जस्तो पो भयो ।
३) तपाईंको दिदीबहिनी हुनुहुन्छ ?
मेरो आफ्नै चाहिँ हुनुहुन्न । तर मेरो काठमाडौं मै एक जना गायिका दिज्यु हुनुहुन्छ, साक्क्षी सुनार । म उहाँसँगै तिहारको टीका लगाइरहन्थें । गाउँमा हुँदा अंकल अन्टीका छोरीहरुको हातबाट टीका लगाउँथें ।
४) तिहारमा आफ्नै दिदीबहिनी भएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन ?
मलाई त खासै फरक पर्दैन । किनकि जो दिदीबहिनीसँग पनि मेरो माया ममता छ । फेरि उहाँ हरुलाई नराम्रो लाग्ला, तर मेरो बाबाआमालाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहना रहेछ ।
मेरा दुई भाई दिदीबहिनी नै जन्माउने प्रयासमा जन्मिएका हुन् । बाबा आमाको चाहना एउटा छोरी पनि होस् भन्ने थियो । त्यो इच्छा मेरो छोरी जन्मिएपछि उहाँहरुलाई पनि पूरा भयो ।
५) समग्रमा तिहारलाई कसरी लिनुभएको छ ?
तिहारमा सधैं जसो गाउँ नै जाने गर्थें तर यसपाला बाबाआमा पनि काठमाडौंमै भएकाले गइएन् । गाउँमा तिहार विशेष हुन्छ, पिङ खेल्नेदेखि धेरै रमाइलो पल गाउँमा हुन्छ ।
६) तिहारको कुनै रमाइलो सम्झन लायक पल ?
मेरो जीवनको सांगीतिक पाटो हेर्ने हो भने तिहारको ठूलो महत्व छ । मैले सानै छँदा हजुरबुवा, बाबाहरुले तिहारमा मारुनी नाचेको, देउसीभैलोमा गाएका भाकाहरु प्रभावित भएको छु ।
आफू ठूलो भइसके पछि पनि सायदै कुनै एउटा देउसीभैलो कार्यक्रमबाट नै सुरुवात भएको हुन सक्छ । त्यस कोणबाट हेर्दा मेरो गीतसंगीतको करियर नै तिहारसँग जोडिएको छ ।
७) तिहारमा कस्ताकस्ता उपहार पाउनुभएको छ ?
दिदीबहिनीहरुबाट टोपी, गलबन्दी, सर्टहरु पनि पाउँछु । विशेषतः मलाई सानोमा हुँदाको उपहारहरु याद आउँछन् । पोष्ट कार्डहरु दशैँ तिहारमा बनाउने गथ्र्यौं, जसमा नेपाली चलचित्रका हिरो हिरोइनको पोष्ट कार्ड सेयर गर्थें । बालापनको याद आइरहन्छन् ।